«Kidnapping» nandamoka – Toamasina: navotsotr’ireo jiolahy ilay Karana nalaina an-keriny | NewsMada
«Kidnapping» nandamoka – Toamasina: navotsotr’ireo jiolahy ilay Karana nalaina an-keriny
Par Taratra sur 10/08/2019
Rehefa hitan’ireo jiolahy nirongo fitaovam-piadiana fa tsy ho tafavoaka ny “opération” noho ny fisian’ny fiara nanaraka avy taoriana, navotsony teo amin’ny lalam-pirenena RN 2 Bis, Dépôt, ilay Karana mpandraharaha nalain’izy ireo an-keriny.Afakomaly alina, tao Toamasina, ny nitrangan’ity “kidnapping” nandamoka ity.
Tsy nahomby! Nitsefotra ny fakana an-keriny nataon’ireo andian-jiolahy miisa dimy nirongo fitaovam-piadiana mahery vaika raha nikasa haka an-keriny teratany karana iray antsoina hoe Iltaf Safoudine, teo amin’ny Boulevard Joffre, Toamasina, ny alarobia tamin’ny 9 ora sy 15 mn alina. Raha ny loharanom-baovao nampitain’ny mpitandro filaminana, tompon’ny orinasa Fibassom, mpivarotra entana ambongadiny, ity teratany karana ity ary teny an-trano fonenany no saika hanatanterahan’ireo jiolahy ny fakana an-keriny azy. Voalaza fa efa niandry teo amin’ny fidirana ny vavahadiny ireo jiolahy nanao saron-tava niaraka tamin’ny fitaovam-piadiana mahery vaika. Raha iny hampiditra ny fiarany teo amin’ny vavahady iny izy, voaambana basy ary ny fiarany ihany no nentin’ireo telo lahy amin’ireo jiolahy nitondra azy nandositra nihazo ny lalam-pirenena faharoa fanampiny iny “RN2 Bis” raha nanaraka tamin’ny fiara hafa avy aoriana kosa ireo jiolahy roa hafa. Toy ireny fahita amin’ny sarimihetsika ireny ny fomba nanatanterahan’ireo jiolahy ny fakana an-keriny.
Navotsotr’ireo jiolahy haingana…
Nandritra izany anefa, nifanehatra tamin’ny zanaka anabavin’ilay Karana nalaina an-keriny ilay fiara 4×4 Prado nentin’ireo jiolahy miaraka amin’ilay Karana. Hatairana ny an’ilay zanak’anabaviny raha nahita fa tsy ny dadatoany ny mitondra ilay fiara fa olon-kafa. Nanaraka avy aoriana nanenjika tamin’ny fiara izy sady niantso mpitandro filaminana avy hatrany. Nony nandalo teo amin’ny RN2 Bis eo Dépôt, Toamasina, navotsotr’ireo jiolahy ilay fiara 4×4 Prado niaraka tamin’i Iltaf Safoudine. Nitsoaka nitsofoka nihazo ny lalam-pasika mihazo eny amoron-dranomasika ireo jiolahy. Fotoana fohy taorian’izay, tomefy mpitandro filaminana (zandary sy polisy) ny sampanan-dalana sy ny lalana mivoaka sy miditra ny tanànan’i Toamasina tamin’ny fotoana nitrangan’ity fakana an-keriny ity. Tsikaritra fa na eo aza ny ezaka ataon’ny mpitandro filaminana, mbola miriaria ihany any ihany ny sasany amin’ireo andian-jiolahy ao anatina tambajotrana mpaka an-keriny. Andrasana indray ny tohin’ity raharaha ity.